Izindatshana zikaSean Gordon mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge USean Gordon
Ukukhiqizwa kwabaholi kungumsebenzi omkhulu wamaqembu wokumaketha. Bagxile ekutholeni, ekubandakanyeni nasekuguquleni izethameli eziqondiwe zibe ngamathemba angaba amakhasimende. Kubalulekile ukuthi ibhizinisi lenze isu lokumaketha elibhebhethekisa ukukhiqizwa kokuhola. Ngokwalokho, ochwepheshe bezentengiso bahlala befuna izindlela ezintsha zokugqama, ikakhulukazi ezweni elihlale ligcwele ngokweqile. Abathengisi abaningi be-B2B baphendukela ku-imeyili, bayibheka njengokusabalalisa okuphumelela kakhulu